08:18 AM ( 1 hour ago )
Total Views: 23.1 K
3354 47 3401
काठमाडौं, माघ १९ – महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले माघ ९ गते १६ जनालाई बिजुली चोरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । जसमा एकजना पूर्व कर्मचारी, चारजना व्यवसायी र ११ जना बहालवाला कर्मचारी छन् ।
उनीहरुले १२ वर्षदेखि बिजुली चोर्दै राज्यलाई करोडौं राजश्व ठगी गरेकाले पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । १६ जना बिजुली तस्करलाई पक्राउ गरेका अपराध महाशाखाका एसएसपी सर्वेन्द्र खनालको प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा भइसकेको छ । अपराध महाशाखामा सरुवा हुनुभएका दीपक अमात्यले जिम्मेवारी सम्हालिसकेको अवस्था छैन । आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर महानिरीक्षकको सचिवालयमा जान लाग्नुभएका एसएसपी सर्वेन्द्र खनालसँग सहकर्मी नारायण अधिकारीले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
बिजुली चोरेको आरोपमा १६ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुमाथिको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?
ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । अन्य अनुसन्धानको काम पनि जारी छ । साधारण हुक गरेर बिजुली चोरेको नभई मिटर उल्टो घुमाएर बिजुली चोरेका कारण हामीले ठगीमा मुद्दा चलाएका हौं । कति बिजुली चोरी भएको छ, कहाँ कति मिटर बिगारेको छ भन्नेबारे सम्बन्धित प्राविधिक बोलाएर यसबारे डाटा पनि लिँदैछौं । यसै अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
बिजुली चोरीको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा कर्मचारी र व्यापारी छन् । पक्राउ परेका व्यापारी भन्दा अरु ठूला व्यापारी पनि बिजुली चोरमा संलग्न छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
अब यिनलाई साना सोच्नु भएन । हामी ठूला ठूला भन्छौं । यिनै पक्राउ परेको पनि वास्तवमै ठूला माछा हुन् । ठूलो सोच्नु स्वाभाविक पनि हो । १२ वर्षदेखि करोडौं रुपैयाँ ठग्नेलाई साना भन्न मिल्दैन । यो भन्दा ठूलो खोज्न कहाँ जाने ? यसलाई सानो भन्न मिल्दैन । यही नै हो ठूलो माछा ।
बिजुली चोरी चाहीँ कसरी गर्ने रहेछन् ?
उनीहरुको आपसी मिलेमतो छ । एउटा सुपरभाइजर छ । उसले आफ्नै गाडीमा मिनी ल्याब राखेर मिटर अल्टर गर्ने सामान लिएर हिँड्छ । आर्थिक लेनदेन मिलेमतो गरेर मिटर अल्टर गरेको देखिन्छ । त्यस्तै मिटर रिडरसँग पनि मिलेर पैसा लेनदेन गरेको देखिन्छ । व्यवसायीले पनि मिटर रिडर र सुपरभाइजरसँग मिलेर राज्यलाई कम पैसा तिर्दै ठग्ने गरेको देखिन्छ ।
बिजुली चोरलाई पक्राउ गर्न त प्रहरीलाई १२ वर्ष लाग्ने रहेछ भने अन्य अपराधी पक्राउ गर्न कति वर्ष लगाउनुहुन्छ ?
अब यो प्रहरीको प्राथमिकतामा परेको विषय होइन । जुन तपाईले प्रहरीलाई भनेर मलाई सोध्नुभयो । यो राष्ट्रका सबै निकायहरु जिम्मेवारी भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यसरी पेश नभएका कारणले यस्तो भएको हो । को कसका कमजोरीले यस्तो भएको भन्ने हेर्ने जिम्मेवारी कि पत्रकारको हो कि प्रहरीको हो । त्यो हामीले हेरिरहेका छौं ।
यस्ता विषयहरुमा प्रहरीले अनुसूचि १ अन्तर्गतको मुद्दामा कारबाही गरिरहेको छ । निमुखालाई मात्र कानुन छ भन्ने होइन । चाहे त्यो कर्मचारी हुन् चाहे सर्वसाधारण हुन् । यसको म्यासेज भनेको यही अपराध गर्ने सबै कारबाहीमा पर्छन् । त्यस्तै प्रहरीले गर्ने अन्य काम पनि छन् । यसमा भन्दा अन्यमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएका कारणले ओझेलमा परेको हो ।
पक्राउ परेकालाई लागेको आरोप उनीहरुले स्वीकार गरेका छन् कि छैनन् ?
त्यो त अब बयानका क्रम सोध्नुभयो तपाईंले । त्यो पक्कै पनि छ । प्रारम्भिक चरण्मा भएका अनुसन्धानका सबै रिपोर्ट पनि हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं । यसमा संलग्न भएका जुनसकै अभियुक्तलाई छोडिन्न । १६ जना पक्राउ परेकाहरुले एक किसिमको गिरोहको रुपमा ठगेका हुन् । हामीले त्यसै पक्रेका हैनौं ।
अरु धेरै ठाउँमा ठूलो मात्रामा बिजुली चोरी भएको खबर पनि आएका छन् । त्यसतर्फ चाहिँ प्रहरीको अप्रेशन नहुने हो ?
बिजुली चोरी गरेर लैजाने, हुक गरेर बिजुली चोरेर लैजानेलाई प्रहरीले पहिलेदेखि नै कारबाही गर्दै आएको हो । तर यो मानेमा भित्री रुपमा लोडसेडिङ बढाउन प्रतक्ष रुपमा सहयोग गर्ने गिरोह जुन अहिले समातियो । यो सबैको कर्नसनको विषय पनि हो । लोडसेडिङ हटाउने कामलाई स्थायित्व दिनका लागि कसरी चुहावट भएको छ भनेर अनुसन्धान गरेर कारबाही गरेको हो । अब यस्ता कारबाही जारी रहन्छ । यसबाट कोही पनि उम्कन पाउँदैनन् । दिन अब आए, बिजुली चोर जहाँ गएपनि सुख छैन ।